Utshintsha njani amaqweqwe eencwadi zakho kwiiBooks | Ndisuka mac
Kukho amaxesha apho izembozo zeencwadi ze-e esinazo ziba yinto ethile. Ngaphezu koko, ngokuqinisekileyo zikho ezinye zazo, nangona inguhlobo olusemthethweni lohlobo olukhuphelileyo, musa ukukuqinisekisa konke konke. Ukuba usebenzisa iBooks kwiMac yakho, Ubusazi ukuba la maqweqwe angatshintshwa?
Unokuvumelana ngaphezulu okanye ngaphantsi ngabaqulunqi bekhava abasebenza nabapapashi. Nangona kunjalo, ukuba kukho into Iinguqulelo zedijithali zezi ncwadi kukuba zinokuzenzekelayo ngandlel 'ithile ukuba sithetha ngohlobo lwayo kwiphepha. Ngokukhangela umfanekiso olula kaGoogle, umzekelo, sinokufumana iindlela ezizezinye kwizembozo zethu. Kodwa masibone ukuba kulula kangakanani ukwenza olu tshintsho kwi app ye-Mac evela kwi-iBooks, njengoko kuchaziwe kuthi Idownloadblog.
Into yokuqala kufuneka ukuba le ncwadi ikhutshelwe ekuhlaleni; Oko kukuthi, le ncwadi ikhutshelwe kwikhompyuter yethu. Khumbula ukuba inokugcinwa efini- efanayo nenkonzo yohlobo lweAmazon- ukuze ungathathi sithuba kwihard drive yethu. Ukuba imeko yakho yeyesibini, kuya kufuneka ucofe kwi icon yelifu ehamba nencwadi kwaye uyikhuphele.
Inyathelo lesibini kukuya kwi-iBooks tab apho siza kuba nesishwankathelo sazo zonke iikopi esinazo phantsi kwebhanti lethu. Apho ungabona ukuba zeziphi izigqubuthelo ezingenakuqinisekisa. Inyathelo lesithathu iya kuba kukulungiselela ikhava entsha esifuna ukuyisebenzisa ukubuyisela esele ikho. Njengoko sele sithethile, Kuya kufuneka ujonge kwimifanekiso kaGoogle -Kana ukuba uyila kakhulu, zenzele ngokwakho-kwaye ukulungele kwikhompyuter yakho.
Okokugqibela, kufuneka ucofe incwadi oyikhethileyo; Khangela ikhava entsha kukhuphelo kwaye uyihudule ukuyibeka ngaphezulu kwencwadi. Umyalezo uza kuvela apho kufuneka uqinisekise khona ukuba ufuna ukutshintsha isiciko. Kwaye emva kokwamkela utshintsho, kuya kuvela isiciko esitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Utshintsha njani amaqweqwe eencwadi zakho kwii-iBooks
I-Logitech MX Ergo, ii-trackballs zisenokunika iimfazwe ezininzi